Oge ezumike | Mee ememe nka Foto ndị na-acha agba agba maka nbudata
Mkpado osisi ezumike ulo
Mkpado okpomọkụ bụ ngwa maka ụgbọ okporo ígwè ụbọchị okpomọkụ! Ụgbọ okporo ígwè ụbọchị okpomọkụ bụ omenala nke sitere na Palatinate ma na-agụnye mpaghara ndị ọzọ dị nso. Site n'emezi obi ụtọ a, a na-achụpụ oyi, tupu ya ebute ọdịnala ọnwụ.
Omenala nke ụbọchị okpomọkụ
Oge nkwụsị nke oge okpomọkụ na-anọchite anya ndụ ọhụrụ, mmiri ahụ ma si otú a malite mmalite ọhụụ ọhụrụ. Dabere na obodo ahụ, ụgbọ okporo ígwè ụbọchị okpomọkụ na-ewere ọnọdụ tupu Ista, omenala na Sọnde nke atọ tupu Ista.
Tinker ụbọchị okpomọkụ na-ejide onwe gị
O doro anya na omenala Kurpfälzer a ma ama nwere mgbakwasị ụkwụ na-ekpere arụsị, ị pụkwara ịchọta ihe akaebe maka ya ọbụna n'oge Eze Sun, Louis XIV. A maghị ma ọ bụrụ na oge okpomọkụ nke oge okpomọkụ dị n'ebe ahụ n'oge ahụ. Mgbe ụgbọ okporo ígwè nke ụbọchị okpomọkụ gasịrị, a na-agba oyi n'oge ọdịdị nke nnukwu snowman na nnukwu ihe ngosi.
Kedu ụbọchị ezumike?
Achịchị oge okpomọkụ bụ mkpanaka dị mfe, ebe a na - akpọ Stecken, nke e ji ụrọ e ji agbaji. Na n'elu na-anọdụ n'ogo yist pretel na mgbe ụfọdụ, ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị ga-ahụ na ọ bụ Ista!
N'obodo ụfọdụ, apụl ma ọ bụ obere bouket bụ ọdịnala n'oge okpomọkụ. Site na mkpado ndị na-acha egwu n'oge ha, ụmụaka na-eso ihe ndị e ji achọ mma nke klọb dị iche iche. Na njedebe, n'ezie, a ga-eri ụtọ pretzel - n'ihi na nke kachasị na nwata, ihe a ma ama!
Na ebe a na-abịa dị mfe nduzi na-esi mee ka oge dị otú ahụ mara mma ụbọchị okpomọkụ. Nke a na-eme ka ọnọdụ ahụ dị elu karịchaa mgbe snow na ala ahụ ka na-achọ ịhapụ ya na ụmụ ha na-arọ nrọ na mmiri iyi.
Mbụ, ị chọrọ ihe ndị a: osisi hazelnut ma ọ bụ ngwuru (bụ nke dị na ụlọ ahịa ifuru), mma akpa, eriri na-apụ apụ, na-eme ka yist pretzel (kpụ ọkụ n'ọnụ ya!), ụta ma ọ bụ akwụkwọ edemede.
Akpa, ị na-amanye mkpanaka maka ụmụ, mgbe ahụ, ịmalite ijupụta osisi site na ala ruo n'elu na mgbachi na-emecha (ma ọ bụ zụta ma ọ bụ mee ya n'onwe gị). Ọ bụrụ na ịchọrọ iji akwụkwọ edemede, ị nwekwara ike ichota ụbọchị ezumike na ogologo ncha akwa. Nke a dị mfe karịsịa maka obere ụmụaka. Naanị tinye ọtụtụ akwụkwọ ntanetị akwụkwọ dị n'elu n'elu, belata ntakịrị ma tinye yist pretast na egg n'elu - ụbọchị okpomọkụ dị njikere.
Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịpị mkpanaka n'onwe ya na akwụkwọ edemede, enweghi oke ókè n'echiche gị!
Nicholas | Na-eme ememe
Na-eme ememme Halloween
Tinker na umuntakiri - ihe okike
Tinker na ụmụ - nnu nnu
Tinker na umu - Osisi nke Ndụ
Tinker na ụmụaka - Mee N'onwe Gị
Tinker na ụmụ - ụzọ ụzọ
N'onwe Gị akwụkwọ akpa | ụbọchị mbụ nke ụlọ akwụkwọ
N'onwe Gị na ụmụaka - Mee N'onwe Gị